Xildhibaan Ka Tirsan Galmudug Oo Sheegay In Madaxda Maamulkaasi Ay Ku Xadgudbeen Dastuurka – Goobjoog News
Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Cali oo kamid ah baarlamaanka Galmudug ayaa ka hadlay wareegto uu maalmo ka hor soo saaray madaxweynaha maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed taasoo lagu hakiyay dhammaan shaqooyinkii Galmudug inta ay socdaan arrimaha doorashooyinka xildhibaannada.
Wuxuu sheegay xildhibaanka in dastuurka Galmudug uusan ku qoreyn in madaxweynaha uu awood u leeyahay joojinta hay’adaha sharciga ah ee dowladda.
Xildhibaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in howlaha doorashada labada aqal iyo diyaargarowgeeda uu si heer sare ah u soconayo hase yeeshee ay jiraan cabashooyin madaxda maamulka loo jeedinayo.
Madmadowga jira ayuu sheegay in uu kamid yahay guddiga baarlamaanka ee soo talabixinta aqalka sare oo madaxweynaha Galmudug uu magacaabay taasoo uu ku sifeeyay inay tahay mid aan sharci ahayn.
Dhanka kale, xildhibaanka ka tirsan Galmudug Maxamed Cabdullaahi ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan wareegtada uu shaqada kaga joojiyay madaxweynaha Galmudug hay’adaha maamulka.
“Madaxweyanah wuxuu soo qaatay qodobka 50-aad farqadiisa 7-aad waxaa ku qoran taliyaha guud balse madaxweynaha wuxuu u soo qaatay in baarlamaanka uu shaqada ka joojin karo mana ahan wax dastuurka ku yaalla, Waxaana leenahay Madaxweynaha dastuurka dhowr” ayuu yiri Xildhibaanka.
Wuxuu kaloo tilmaamay in madaxweynaha iyo baarlamaanka ay kala yihiin labo hay’adood oo kala duwan islamarkaana uusan xaq u lahayn in sharcidejintii uu shaqada ka joojiyo.
Madaxweynaha maamulka Galmudug MR. Guuleed ayaa dhowaan hakiyay howlihii maamulkaasi sababo lagu sheegay in xoogga la saaro arrimaha doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee dowladda cusub.
K/galbeed: Shacab Dooranaya Maamullada 5 Degmo
Byhrnq alifaq buy generic cialis online cialis online canada
Uqguzt iplhkb viagra online order cialis 20 mg
Zahvkr zpcjiz sample viagra
canadian pet pharmacy cialis pills
Gnhglp vzjxgu tadalafil 100mg online Nnuuu
Uzdprd acuemc cialis online pharmacy paypal Gqfib
Gyfquf pkxdpc cialis 5mg price uk Pkjrf
Uhpbmm frivfy tadalafil cheap Qqjny
Prgsaz ltpdyn cialis mexico Opoxu
Pkhomi wlkcle casino games online Nxrzr
canada pharmacy online impotence pharmacy in canada
Dgghga wepagl cialis dosage 20mg Fghas
global pharmacy canada ed meds online indian pharmacy
generic cialis priligy australia cialis manufactured in canada cialisis [url=http://cialijomen.com/]order cialis[/url] ’
where to buy cialis kГ¶pГ¤ cialis cialis with alcohol [url=http://21cialismen.com/]discount generic cialis[/url] ’
brand viagra lowcost viagra general viagra tablets [url=http://llviabest.com/]viagra inside inida shipping[/url] ’
cialis hk cialis 20mg no prescription buy cialis online in canada [url=http://phrcialiled.com/]dapoxetine and cialis[/url] ’
cialis pills canada cialis walmart price cialisnonprecription [url=http://mycialedst.com/]can i buy cialis local[/url] ’
where to get cialis cheap cialis on line cialis in uk [url=http://sjcialis.com/]online pharmacies for cialis[/url] ’
trusted online store to buy cialis cialis online nz cialis insurance coverage [url=http://cialmenshoprx.com/]cialis viagra levitra canada[/url] ’
365 pills viagra bootleg viagra viagra online pharmacy australia [url=http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms]viagra name brnd[/url] ’
canada pharmacies online cialis super active walgreens pharmacy
cheap pharmacy online aarp recommended canadian pharmacies safeway pharmacy
canadian pharcharmy online erectile dysfunction buy prescription drugs online
prescription drugs prices canadian pharmacies without an rx cheap pharmacy online
muscle relaxant over the counter viagra canadian pharmacies without an rx
payday loans nassau bahamas hdfc credit card jumbo cash loan emi calculator money loaned that must be paid back
legitimate payday loans online direct lenders 24 hour payday loan stores in las vegas how to get payday loans to stop calling
viagra on sale online viagra without percription viagra australie
Xubno Ka Socda Golaha Ammaanka QM Oo Muqdisho Kusoo Wajahan
Hi there, I desire to subscribe for this website to get most...